Vahosi voripisirwa kutukirira nyachide
You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»Vahosi voripisirwa kutukirira nyachide
By Muchaneta Chimuka on	 December 8, 2017 · NHAU DZEKUMATARE
MUKADZI vahosi pabarika uyo wekutukirira nyachide nekuda kwegodo mushure mekunge iye arambwa nemurume, akaigochera pautsi zvichitevera mutongo wakapihwa nedare wekuti abvise faindi ye$100 uye kukundikana kwake achanodya refovhoro.
Sthengisiwe Mukuya (27) wekuUnit P Extension, kuChitungwiza akabatwa nemhosva yekutumira mashoko ekutuka kuna Eveline Munyathi pasi pemutemo weSending Offensive or False Messages Act, Section 88(a) of the Criminal Codification Act Chapter 12:05.
Mutongi wedare reChitungwiza Magistrate’s Courts, Blessing Murwisi, akamutemera chirango chekubvisa faindi ye$100 uye kukundikana kwake achanogara mujeri kwemwedzi wose.
Muchuchisi Tendai Katonha akaudza dare kuti nomusi wa31 Gumiguru gore rino munguva dzemanheru kuSvinurai Phase 3 kuDema, Munyathi – uyo akaroorwa neaimbove murume waMukuya – akatambira mashoko ezvinyadzi uye anodzikisira.
Munyathi akatambira mashoko aibva panharembozha yaMukuya ine nhamba dzinoti 0780 664 162 anoti, “Chakati chaambuya vako, ini ndokuuraya wakatevera mutwin wako nhasi kana mangwana chaiwo. Ini ndokupedzera pamba pako ndopaziva ndokwira kuuyapo izvozvi kana une nharo.”
Ongororo yakaitwa nemapurisa inoratidza kuti Mukuya akashandisa nharembozha yake mukutumira mashoko ezvinyadzi aya.
Mukuya anobvuma mhosva yake iyi achiti, “Hongu ndakamutuka mushure mekunge andiudza mashoko ekuti ndiri pfambi”.
Munyathi akaudza dare kuti Mukuya akamutukirira nekuda kwegodo rekuti akarambwa nemurume.